Sa ve ny fandinihana ny SEO momba ny fitaovana ara-barotra tsara?
Araka ny antontan'isa, maherin'ny 90% n'ny mpanjifa no tia ny hafatra fampitam-baovao tahaka ny tantara. Voaporofo fa ny tantara iray maharesy lahatra dia manampy ny olona hahazo tsara kokoa ny olana. Tsy misy ny mandà fa na dia ny olon-dehibe aza mahatsapa ho maivamaivana rehefa miaina amim-pifaliana ny rehetra.
SEO raharaha fianarana SEO dia fitaovana lehibe momba ny varotra. Ankehitriny, ireo manam-pahaizana Semalt dia hilaza aminareo bebe kokoa momba ity vahaolana manaraka ity - hand spice mill. Rehefa avy namaky ilay lahatsoratra ianao, dia ho fantatrao ny fomba ahafahanao mampihatra ny fianarana tranga ho fampivoarana ny orinasa.
Ny fanadihadiana tranga dia fitaovana mahery vaika izay afaka manampy anao hanitatra ny olana amin'ny mpanjifa amin'ny fanazavana ny fomba ahafahan'ilay raharaham-barotra atao amin'ny mpanjifanao. Ny fandalinana trangan-javatra dia safidy tonga lafatra ho an'ireo tompon'ilay tranonkala izay ny tanjona voalohany dia ny mamela ny olona hividy ny vokatra sy ny tolotr'izy ireo. Ny antony mahatonga ny fianarana ho toy izany manokana dia ny fomba fampifangaroana tantara amin'ny votoatin-kevitra momba ny raharaham-barotrao.
Inona no antony voalohany tokony hampiasana fandalinana ny SEO?
Ny SEO Case Study dia fitaovana mahomby ho an'ny fampahalalam-baovao
Ny mpividy an-tserasera amin'ny aterineto dia manolotra famoahana fanadihadiana momba ny tranga ao amin'ny tranonkala. Na izany aza dia afaka mandroso bebe kokoa ianao ary manaiky ny gazety na ny gazetiboky iray ao an-toerana mba hahasarika mpividy bebe kokoa. Safidy iray hafa hanamboarana ny lazanao dia ny hampiseho ny toe-javatra iainanao amin'ny loharano sasany natokana ho an'ny indostria.
Diniho koa ireo vondrona LinkedIn manokana. Izy ireo dia tonga lafatra amin'ny fizarana ny traikefanao amin'ny olon-kafa. Arak'izany, ny fizarana dia miahy. Ataovy izay hahatsapan-javatra manokana ny olona amin'ny fanomezana azy ireo fampahalalana maimaimpoana sy mahasoa anao.
Azonao atao ny mamoaka malalaka ny fandaharam-pianaranao momba ny LinkedIn Pulse. Ity sehatra ity dia ahafahan'ny mpisera mamoaka lahatsoratra izay azo zaraina. Hevitra iray lehibe kokoa ho an'ny SEO anao dia ny hanavao indray ny fandaharam-pianarana efa misy any amin'ny fampisehoana na ny sary an-tsarimihetsika mba hizarana. Rehefa vita ianao, afaka mizara izany amin'ny kaonty media sosialy ianao.
Ilaina ihany koa ny manamarika fa afaka mampiasa ny raharaha momba ny informatika ianao mba handefa ny mety ho an'ny mpanjifa.
Ny rafitry ny fikarohana SEO
Ny tsara indrindra dia tokony hanana fiandohana sy afovoany ary faran ny fianadihanao. Ataovy ao an-tsaina, fa ny fandalinana matetika dia maharitra kokoa sy bebe kokoa noho ny tantara am-pihetseham-bavaka. Noho izany, ny drafitra mety dia ny fanalahidy. Ny fotoana manaraka dia mamolavola ireto singa manaraka ireto:
Lohateny fohy sy malefaka;
Ny fandinihana lalina ny olana atrehin'ny mpanjifa;
Fanazavana momba ny fomba ifandraisan'ny raharaham-barotra amin'ny olan'ny mpanjifa;
Ny porofo mampiseho ny fomba nanampian'ny tolotrasa na ny vokatrao ny mpanjifanao;
Antsoy amin'ny hetsika izay mifandray amin'ny vokatrao na ny serivisinao.
Eo an-tananao ny fomban-draharaha tokony hofidiana rehefa manangana fandaharam-pianarana. Ny zava-dehibe tokony hotsaroana dia ny fanadihadinanao dia tokony hamorona tantara manodidina ilay olana mba ho vahana amin'ny farany.
Raha ny marina, ny fianarana tranga dia fitaovana mahery vaika izay afaka manatsara ny SEO amin'ny fomba maro. Ny fanadihadiana dia manampy amin'ny fanatsarana ny mpanjifa kokoa amin'ny fanomezana ny fandinihana lalina ny fomba fiasa amin'ny serivisy na vokatrao.
Arahabaina! Ankehitriny dia fantatrao ny fototry ny famoronana fanadihadiana mitranga. Angamba, fotoana tena tsara ny milaza tantara iray amin'ny anao manokana.